Yay, Yea, Yeah, or Yes? - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on July 14, 2015 at 11:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Yay သည် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ၀မ်းသာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အောင်ပွဲခံခြင်းနှင့် သဘောကျခြင်း အစရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်များကို ဖော်ပြသော အာမေဍိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံး၏ ဇစ်မြစ်ကတော့ ၀ိုးတစ်ဝါးပါ။ တချို့သော အဘိဓာတ်များက "yeah" မှ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အများစုကတော့ "yay big" နဲ့ "yay high" အဆင့်တွေက ဆင်းသက်လာတဲ့ ကြိယာထောက်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း Oxford English အဘိဓာန်ကတော့ "yay high" ထဲက yay သည် yea ကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါနဲ့တောင် လူတွေက ဘာကြောင့် ရှုပ်ထွေး နေတာပါလိမ့်။
ဘယ်ကပဲ ဆင်းသက်လာလာ ကိစ္စမရှိပါ။ Oxford English အဘိဓာန်ထဲမှာ yay အတွက် ပထမဦးဆုံးသော ဥပမာဝါကျက ၁၉၆၃ ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းက တကယ့်ကို အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ သူက ရေလွှာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေရဲ့ စကား၊ အသုံးအနှုန်းတွေကိုပဲ ပြောတယ်။ cowabunga (ရင်ဖိုမှုကြောင့် အော်သံ)၊ wipe-out (ရေလွှာလှိုင်းစီးရာ၌ ဟန်ချက်ပျက်ခြင်း) I'm getting stoked. (ငါတော့ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ)…. Yay gremmies (ရေး…..နတ်ဆိုးတွေ) (gremmies သည် ငယ်ရွယ်သော (သို့) အတွေ့အကြုံမရှိသော အများအားဖြင့် တခြားသူတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေး သော ရေလွှာလှိုင်းစီး သမားလေးများဖြစ်ပါတယ်။
Yea သည် ရှေးဟောင်းအင်္ဂလိပ်စာ (Old English) အထိ ဇစ်မြစ်လိုက်ရလောက်အောင် ပို၍ အိုဟောင်းသော စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ Germanic ဘာသာစကားတိုင်းတွင် ၄င်းနှင့် တူညီသော စကားလုံးများရှိပါတယ်။ "ဟုတ်ကဲ့" (yes) နှင့် "တကယ်ပါ" (indeed) တို့ အစားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းကို ကြိယာထောက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Squiggly loved the chocolate, yea, he reminisced about it for weeks. (Squiggly က ချောကလက်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ တကယ်ပါ။ အဲဒီအကြောင်းကို အပတ်များစွာကြာအောင် သူ စမြုံ့ပြန်နေတယ်။) နာမ်အနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Aardvark was one of 30 yeas in favour of limiting access to the lake. (ရေကန်ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကန့်သတ်တဲ့ဘက်က "ဟုတ်ကဲ့" ပေါင်း အခု (၃၀) မှာ Aardvark က တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။) အခုခေတ်မှာတော့ မဲပေးတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါ လူတွေက "yea" ကို သုံးကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ yeah က yes အစား အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အရပ်သုံးစကားဖြစ်ပြီး (၂၀)ရာစုစောစော ပိုင်းကတည်းက အမေရိကားမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဘိဓာန်အများစုမှာ Yeah ကို အရပ်သုံး (သို့) စကားပြောအဖြစ် သတ်မှတ်ဆဲဖြစ်တဲ့အပြင် တချို့အပြောအဆိုအပြုအမူလမ်းညွှန်များ (manners guides) နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများက Yeah သည် ပေါ့ပေါ့တန်တန်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပြီး yes က သာလျှင် ယဉ်ကျေးပြီး ပညာရှင်ပီသသော တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုရေးသားကြပါတယ်။ (ကျွန်တော် တောင်မှ Yes အစား Yeah လို့ ပြောလေ့ရှိပေမဲ့ အခုတော့ ကြိုးစားပြင်နေပါတယ်။)
Yay နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူအောင် yea နှင့် yeah ကို အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်သူများထံက ကြားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို သုံးနှုန်းခြင်းက ဒီစကားလုံး (၂)လုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သိပ်နားမလည်လို့ ယုံကြည် ပေမဲ့ တစ်ဖက်ကလည်း လူတွေက သူတို့ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ "Yes" လို့ ထအော်တာကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ Yea (သို့) Yeah သုံးနှုန်းခြင်းက မဆီလျော်ဘူးလို့ ပြော၍ မရပါ။
Quickanddirtytips.com မှ Mignon Fogarty, Grammar Girl ၏ Yay, Yea, Yeah, or Yes? ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။